प्रेमिकासँग ‘किस’ माग्दा ब्वाईफ्रेन्ड जेल सम्म पुग्नुपर्यो ! कसरी ? जान्नुस - Babal Khabar
November 18, 2021 by बबाल खबर
एजेन्सी । आफ्नै प्रेमिकासँग किस माग्दा एक युवक जे’ल पुगेका छन् । चेन्नईकी एक युवतीले आफ्नो प्रेमीलाई एक अनौठो प्रस्ताव राखिन् ।
सर्तका कारण ब्वाईफ्रेन्ड सिधै जे’ल पुगे । जब प्रहरीले युवकसँग सोधपुछ गरे तब ति युवकले एक किसका कारण यस्तो भएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नी गर्लफ्रेन्डसँग एक किस मागेका थिए । तर, उनकी गर्लफ्रेन्डले उनीसँग अचम्मको सर्त राखिन् । प्रेमीकाले उनीसँग चेन्नईको सडकमा बुर्का लगाएर घुमेमा मात्र ‘कि’स दिने सर्त गरेकी थिइन् ।
प्रेमीकाले भनेअनुसार युवक चेन्नईको रोयायेट्टा इलाकामा बु’र्का लगाएर घुम्न थाले । उनले बुर्का लगाएका थिए भने खुट्टामा चप्पल लगाएका थिए । उसलाई देखेर मानिसहरु चोर चो’र भन्दै करा’उँन पनि थाले ।
त्यो देखेर मानिसहरुले उनलाई महिला नभएको शं’का गर्दै केही समयपछि चोर भन्दै उसलाई समातेर पुलिसलाई जिम्मा लगाई दिए । सोधपुछका क्रममा युवकले आफ्नी गर्लफ्रेन्डले लगाएको सर्तले बुर्का लगाएर घुम्नु परेको बताएका छन् । साभार खबर , यो पनि ज्योतिष विद्या यस्तो विद्या हो जसले केहि न केहि तरिकाबाट मानिसको भविष्य बताउँछ । पछिल्लो समयमा यो विद्या प्रमाणित पनि भइसकेको छ।
विभिन्न तरिकामध्ये ज्योतिष विद्याको एक तरिका हो हस्त रेखा । यहि रेखाको माध्यमबाट ज्योतिषले तपाईको आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै कुरा बताउँछन्।
के हो यसको अर्थ ? जुन व्यक्तिको दुवै हातमा यस्तो रेखा हुन्छ उनीहरु ठूलो काम गरेर प्रसिद्ध हुने तथा मरेपछि पनि यादगर हुने गर्छन्। जुन व्यक्तिको एउटा मात्र हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुन्छ उनीहरु प्रतिष्ठित हुने र सफलताले उनीहरुको कदम कदममा चुम्ने बताइन्छ। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevकिन देखिन्छ यस्ता डरलाग्दा सपना ? यस्तो छ कारण
nextश्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सकिदैन …..